LEGO Harry Potter Makore 5-7, iri kutengeswa kwenguva shoma | Ndinobva mac
Lego Harry Potter Makore 5-7 mutambo zvichibva pamabhuku matatu ekupedzisira uye mana ekupedzisira Harry Potter mafirimu, LEGO Harry Potter: Makore 5-7 anounza iwe kusangana nevatambi vatsva, matambudziko matsva uye zvimwe zvakawanda zvemashiripiti sezvaunogadzirira yekupedzisira kurwa naIshe Voldemort.
Haisi nguva yekutanga kuti mutambo mukuru uyu uiswe mukutengesa muchitoro cheApple. Mune ino kesi zvakafanana nezvakaitika zvakapfuura Iko kupihwa ndekwenguva yakatarwa uye nekudaro hatizive kuti ingadzoswe pamutengo wayo wepakutanga, saka usanonoka kutenga zvakawandisa kana usina paMac yako.
Iyo saga yemitambo iyi yakanaka uye iyi ndeimwe yeayo asingakwanise kushayikwa muunganidzwa wako weLEGO Harry Potter mitambo. Ishe Voldemort vari kuparadza Hogwarts zvidhinha nezvidhinha uye ndiwe chete unogona kumumisa. Vakai, pwanyai, uye munatse nzira yenyu kuburikidza neinoshamisa LEGO nhanho inoitika mune dzese Muggle nyika uye nyika yewizarding.
Izvi ndizvo zvishoma zvinodiwa kutamba pane yedu Mac: processor: 1.4 GHz, RAM: 2GB, Graphics Kadhi: 128MB, Hard Dhiraivha: 7GB. Aya anotevera makadhi emifananidzo haana kutsigirwa: ATI X1xxx, ATI HD2xxx, NVIDIA 7xxx akateedzana, uye Intel GMA dzakateedzana. Makadhi anotevera anoda kuti iwe uve ne4GB ye RAM mune yako system: NVIDIA 320M, NVIDIA 9400, uye Intel HD 3000. Uyu mutambo hausi kutsigira mavhoriyamu akaumbwa seMac OS Plus (kesi inonzwisisika).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mitambo » LEGO Harry Potter Makore 5-7, ari kutengeswa kwenguva pfupi
Pixelmator Pro inovandudzwa nenhamba yakakura yezvinhu zvitsva